नगरभन्दा गाउँको शुल्क चर्को- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
नगरभन्दा गाउँको शुल्क चर्को
मंसिर ४, २०७६ ठाकुरसिंह थारू
(बर्दिया) — कर, शुल्कलगायतमा छुट दिएर लगानी आकर्षित गर्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको बेला यहाँको एक गाउँपालिकाले चर्को शुल्क तोकेको छ । बढैयाताल गाउँपालिकाले छिमेकी नगरपालिकाले भन्दा ६ गुणासम्म बढी शुल्क लिने निर्णय गरेपछि स्थानीय व्यवसायी आक्रोशित छन् । उनीहरूले त्यस्तो शुल्क नतिर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
गाउँपालिकासँगै जोडिएको बाँसगढी नगरपालिकाले भने ठूला उद्योग तथा कम्पनीलाई आकर्षित गर्न तुलनात्मक रूपमा थोरै शुल्क तोकेको छ । नगरपालिकामा चौधरी ग्रुपले वाइवाई र पोखरा फुड्स प्रालिले रारा चाउचाउ उत्पादनका लागि कारखाना स्थापना गरेका छन् ।
‘हामीसँग कुनै पनि सुझाव तथा छलफल नै नगरी बढैयाताल गाउँपालिकाले अन्य पालिकाभन्दा ६ गुणा बढी कर लिने निर्णय गरेको रहेछ । त्यसको हामीले विरोध गरेका छौं र त्यो निर्णय मान्दैनौं,’ बढैयाताल गाउँपालिका उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बालकृष्ण लामिछानेले भने, ‘पालिकाले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई त्रस्त बनाएको छ ।’ उद्योगी तथा व्यवसायीमार्फत लगानी भित्र्याउन सके स्थानीय युवाले रोजगार पाउने उनले बताए । बाँसगढी नगरपालिकामा स्थापना गरिएका दुई ठूला उद्योगले पनि पाँच सय बढीलाई रोजगारी दिएका छन् ।
बढैयातालले सञ्चालनमा रहेका उद्योगका लागि र उद्योग नवीकरणका लागि २०/२० हजार शुल्क तोकेको छ । छेउको बाँसगढी नगरपालिकाले सञ्चालनमा रहेका उद्योगका लागि १० हजार र नवीकरण सिफारिसका लागि ४ हजार रुपैयाँ कर तोकेको छ । औषधि पसलका लागि बढैयातालले १० हजार र बाँसगढी नगरपालिकाले ५ सय रुपैयाँ शुल्क लिन्छन् । इँटा उद्योगका लागि बढैयातालले एक लाख र बाँसगढी नगरपालिकाले १५ हजार शुल्क लिने निर्णय गरेका छन् ।
यस्तै ‘क’ वर्गको बैंकका लागि बढैयातालले ५० हजार, ‘ख’ वर्गका लागि ३० हजार, ‘ग’ वर्गका लागि २५ हजार र ‘घ’ वर्गका लागि २० हजार शुल्क तोकेको छ । बाँसगढी नगरपालिकाले भने क्रमश: ३० हजार, २० हजार, १७ हजार र १५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । ठूला मदिरा पसलका लागि १२ हजार र साना मदिरा पसलका लागि ५ हजार तोकिएको छ । बाँसगढीले भने ठूला मदिरा पसलका लागि ३ हजार र साना मदिरा पसलका लागि २ हजार तोकेको जनाएको छ ।
‘यहाँको स्थानीय सरकारले सञ्चालनमा रहेका साना उद्योग र पसल बन्द गराउन खोज्यो । ६ सय प्रतिशतसम्म बढी शुल्क लिनु भनेको व्यापार बन्द गर भनेको हो,’ अध्यक्ष लामिछानेले भने, ‘यति चर्को कर लगाएपछि उद्योगी र बैंक यहाँ आउन मान्दैनन् ।’ अन्य पालिकाले भने स्थानीय युवाका लागि रोजगार सिर्जना गर्न पाँच/दस वर्षका लागि कर छुट दिइरहेको उनले बताए । कर घटाउन माग गर्दै व्यवसायीले पालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । पालिकालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन लगानी भित्र्याउनुपर्ने सुझाव व्यवसायीको छ । त्यसका लागि पालिकाले व्यापारीमैत्री कर तोक्नुपर्ने सुझाव छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले गत वर्षको कर मिनाहा गर्ने तर कर नघटाउने अडान राखेका छन् । उनले सबै व्यवसायीलाई पालिकामा दर्ता हुन आग्रह गरे । प्रकाशित : मंसिर ४, २०७६ ०९:१६
मिलापत्रमा घटना टुंग्याउँदा अपराध बढ्यो
कार्तिक १८, २०७६ ठाकुरसिंह थारू
(बर्दिया) — गत वर्ष सुन्दरपुर गाउँमा गएर रोकाय समूहले मारपिट गरेपछि प्रहरीमा ठाडो उजुरी पर्‍यो । सामान्य कुटपिट भएको भन्दै गाउँका अगुवाले मिलापत्र गराए । त्यही समूहले फेरि ठाकुरबाबा नगरपालिका–३, प्रतापपुरमा विवाद गर्‍यो । बिनाकारण झगडा गर्न थालेपछि स्थानीय मिलेर लखेटे । त्यहाँ पनि मिलापत्र भयो ।
ठाकुरबाबा–८, कालीगौडीका स्थानीयसँग कैयौंपल्ट विवाद भयो । कुटपिट गरे । फेरि पनि अगुवाहरूले मिलापत्र गराए । दुई साताअघि त्यही रोकाय समूहले बिनाकारण अटो रिक्सा मजदुरलाई कुटे । मोबाइल लुटे । रिक्साको सिसा फुटाए । स्थानीय प्रहरीमा उजुरी पुग्यो । गाउँका अगुवाहरूको यसपटक पनि क्षतिपूर्ति दिलाएर मिलापत्र गराए ।
गाउँका सर्वसाधारणलाई दुर्व्यवहार गर्नु स्थानीय देवी रोकाय, सन्तोष रोकाय र शरण रोकायको समूहका लागि सामान्य थियो । अन्ततः भाइटीकाको साँझ त्यही समूहले भुडकैयाका सर्वसाधारणमाथि आक्रमण गर्‍यो । गाउँका ३२ वर्षीय सतराम थारूको मृत्यु भयो । दर्जनभन्दा बढी स्थानीय घाइते भए ।
यस समूहले स्थानीय र आसपासका गाउँमा पुगेर विवाद गर्दै आएको धेरै भयो । तर सबै घटना मिलापत्रमा टुंगिने भएकाले उनीहरू हत्या गर्नसमेत पछि परेनन् । उनीहरूले आफूलाई त्यस क्षेत्रको डन मान्दै आएका छन् ।
‘पहुँचवाला हुन् । त्यसैले उनीहरूले सर्वसाधारणलाई गालीगलौज गर्नु, हेप्नु र कुट्नु सामान्य हो । दर्जनौं घटना भए तर मिलापत्र गराइयो,’ भाइटीकाको दिन भएको घटनाका पीडित महेश चौधरीले भने, ‘रिक्सा मजदुरलाई कुटपिट गरेको घटनामा उनीहरूमाथि मुद्दा चलाएको भए सायद सतरामले ज्यान गुमाउनु पर्दैनथ्यो होला ।’
प्रहरीले हत्या आरोपमा त्यस समूहका रोकायत्रयसहित आठ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ । एक जना अझै फरार छन् । पक्राउ परेका देवी भगौडा सैनिक हुन् । सन्तोष नेपालगन्जमा एमआर र शरण भारतीय सेनामा कार्यरत छन् । उनीहरूको समूहको आतंकले गाउँ नै त्रस्त बन्दै आएको थियो ।
‘उनीहरू कसैलाई मान्छे गन्दैनन् । कुटपिट गरिहाल्छन्,’ चौधरीले भने । इलाका प्रहरी कार्यालय भुरीगाउँका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक वसन्त पाण्डेले उक्त समूहले गाउँमा पटकपटक विवाद गर्ने गरेको मौखिक उजुरी बकुवा प्रहरीमा आएको तर गाउँका अगुवाहरूले मिलापत्र गराएर लैजाने गरेको बताए । आफू हालै मात्रै सरुवा भएर आएका कारण उक्त समूहको गतिविधिबारे धेरै जानकार नभएको बताए ।
‘इलाका प्रहरीमा अटो रिक्सा चालक कुटपिट भएको रेकर्ड छ । तर अगुवाहरूले त्यही दिन क्षतिपूर्ति तिर्ने गरी मिलापत्र गराएका हुन्,’ उनले भने, ‘मौखिक उजुरीबारे प्रहरीमा अभिलेख हुँदैन । तर हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका व्यक्तिको गतिविधि राम्रो नभएको स्थानीयबाट जानकारी आएको छ ।’ बिनाकारण सतरामको हत्यापछि स्थानीय आक्रोशित छन् । झडप हुन सक्ने भन्दै गाउँमा बाक्लो प्रहरी परिचालन गरिएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले संयुक्त रूपमा गस्ती गरिरहेको छ ।
रोकाय समूहले गाउँमा आतंक मच्चाउँदै आएको ठाकुरबाबा–८ का वडाध्यक्ष निमप्रसाद थारूले बताए । ‘उनीहरूका कारण समुदायमा नै विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यस समूहले पहिले पनि अराजक गतिविधि गर्दै आएको थियो । अहिले त हत्यामै उत्रियो।’
प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७६ १२:५३
अर्थतन्त्रमा कोरोना असरबारे राष्ट्र बैंककाे अध्ययन
औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात ठप्प
रोकिएको रोकियै भयो रेल
कस्तो हुन्छ ट्रेसिङ एप ?
नेरु हालसम्मकै कमजोर, डलरको भाउ १ सय २२.५० रुपैयाँ पुग्यो
अब १४.२ किलोकै ग्यास
संयुक्त राज्य अमेरिका ४३२१३२ १४८१७ २३९०६
हाल १,४८४,८११ ८८,५३८ ३२९,८७६
मानवीय र आर्थिक क्षतिको भुमरी
विश्वम्भर प्याकुर्‍याल चैत्र २७, २०७६
गत तीन वर्षसम्म सालाखाला ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेर भावी समृद्धिको सपना देखिरहेकै बेला महामारीअघि नै हाम्रो अर्थतन्त्रमा योगदान दिने मुख्यमुख्य परिसूचक ढलपलाउन थालिसकेका...
टंगालको आँखा छल्न भद्रकालीको बाटो !
सफल घिमिरे चैत्र २७, २०७६
सरकारले कोरोना नियन्त्रणका सामग्री किन्ने जिम्मा घुमाईफिराई सेनालाई नै दिइछाड्यो । सेनाले खरिदको घोडा दौडाउन थालिसक्यो, तर त्यसको गति र दिशा गलत भए सम्हाल्ने लगाम सरकारसँग...
डेटलाइन तराई : जानु र फर्किनुको अन्तर
चन्द्रकिशोर चैत्र २७, २०७६
थातथलो छाड्न सितिमिति कोही चाहँदैन । लोकमनोविज्ञान पनि लामो समयसम्म त्यहीअनुसार बन्यो— डिह (मूलथलो) मै गुजारा गर्ने, साग र सिस्नु खाएर पनि त्यहीँ बाँच्ने । डिहमै जीविकाका...
खाद्यान्न अभाव टार्न फुड बैंक
सीता ढुंगाना चैत्र २७, २०७६
संसारभरका मानिसहरू दैनिक खाद्यान्न जोहो गर्न कुनै न कुनै काममा जोडिएका हुन्छन् । कोही आफू स्वयं उत्पादनमा जोडिएका हुन्छन् भने कोही व्यापार–व्यवसाय वा ज्याला मजदुरीमा आबद्ध...
नयाँ गभर्नरले गर्नैपर्ने काम
सम्पादकीय चैत्र २७, २०७६
मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा सोमबार राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार र मौद्रिक क्षेत्रको व्यवस्थापक केन्द्रीय बैंकको कार्यकारी पदमा पुगेका...